Tezitra amin’ny fanambaran’i Isiraely momba ny Moske Ibrahim ny Palestiniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2010 21:35 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, বাংলা, Español, English
Nanao fanambarana vao haingana ny Praiminisitra Isiraeliana Binyamin Netanyahu fa manam-pikasana ny hametraka ny Fasan-dRahely any Bethlehema sy ny Mosake Ibrahim/Zohin'ny (Fasan'ny) Patriarka any Hebron, izay samy any Cisjordanie, samy faritra fehezin'ny firenen-kafa izy roa ireo, ho toerana Lovan'ny Jiosy. Nampitroatra ny Palestianiana izany fanambarana izany; Heverina ho toeram-pandevenana an'i Abrahama, ny vadiny Saraha sy ny hafa, ka toerana manandanja manokana na ho an'ny Jiosy na ho an'ny Miozolomana ny Moske Ibrahim/Zohin'ny Patriarka. Teto ihany koa no nisian'ny vono olona nahazo ny mpivavaka Miozolomana tamin'ny 1994.
Moske Ibrahim / Zohin'ny Patriarka (novokarina indray ka ambany alalan'ny Creative Commons)
Talal Shihadeh, ao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny Palestine Think Tank, no manazavazava ny fitsidihan'ny voanjo Isiraeliana ao amin'ny Moske Ibrahim (na Abrahama):
Teraka tato amin'ity tanàna ity aho, ary nanakaiky tokoa ny Moske Abrahama. Vantany vao azon'ny vahiny i Cisjordanie tamin'ny 1967, dia nametraka ny voanjo andiany voalohany avy hatrany tamin'ny tanin'ny mponina tao Hebrona ny governemantan'ny mpanani-bohitra, ary nantsoiny hoe Qiriat Arbaa. Amerikana ny ankamaroan'ireo voanjo niaina tao ireo. […] Nandritra ny taompolo 70 sy 80, dia nitsidika ny Moske mandrakariva ny voanjo, manatontosa ny fotoam-pivavahany eo ambany fanaraha-mason'ny mpiambina amin'ny tafika Isiraeliana hatramin'ny Ramadan tamin'ny 1994 taorian'ny vonomoka tao amin'ny Moske Abraham nataon'i Baruch Goldstein, ka nahafatesana Miozolomana 29 sy 125 hafa no naratra nandritra ny fotoam-bavaka Al Fajr). Taorian'io famonoana io dia nanome fahafaham-po an'i Goldstein sy ny vonajo tamin'ny fampizarana roa ny toerana ny miaramila mpanani-bohitra, misy ny ho an'ny Miozolomana ary misy ny ho an'ny Jiosy. Taorian'izany dia tena sarotra tokoa ho an'ny Miozolomana ny fidirana ao amin'ny moske. Mora kokoa ny miditra anaty seranam-piaramanidina noho ny miditra amin'ny moske. Tafiditra amin'ny fombafombam-piarovana ny fananana kara-panondro, fisavana ny vatana, ary ny fisavan'ny milina (tsy atao izany kosa ny voanjo).
Taorian'ny filazana farany momba ny fasan-dRahely sy ny moske Ibrahim tao Hebrona di anamarana ny teniny i Talal hoe:
Ny fangalarana ny tany, ny tantara, ary ny lova……. no lakilen'ny fandriampahaleman'i Isiraely any Proche Orient.
Rebel Spirits, mpanoratra Palestiniana hafa koa, no milaza ny fihetseham-pony ao amin'ny Bolongany Hazem:
Mety ho marainam-pangorohoroana tahaka ny maraina nanazarana ahy hatry ny ela androany, saingy tsy mitovy amin'ny isan'andro ny androany. Mba hampahazava kokoa, nisy zavatra nitranga omaly niteraka ny androany, sy izay rehetra entiny eo amin'ny lafiny atambo ho an'ny vahoaka Palestiniana. Heloka vaovao sy amboamboarina manampy ny lisitry ny asam-pandatsahan-dra ataon'ny Isiraeliana amin'ny vahoakanay ka efa mahazatra anay nandritra ny taompolo maro indray ity fanapahan-kevitry ny Praiminisitra Benjamin Netanyahu hampiditra ny Moske Ibrahim any amin'ny faritra bodoina any Hebron sy izay antsoina hoe “Fasan-dRahely” any amin'ny faritra bodoina any Bethlehema ho toerana lovain'ny Jiosy.